Author: Samurr Zololabar
Ny malagasy sy ny fahaiza-mikabary aza dia mbola azo antsoina hoe voahangy mitohom-bolamena, lopotra migalom-bolafotsy, solohoto sy firaka, harahara sy vy, tatamo sy voahirana ary rano sy vary.
Mafy tokoa izay fahoriana midona aminareo izao satria folaka andry niankinana, toro vato fandiavana ny ankohonana, ary potraka fefy mpanohan-drivotra ny fianakaviana. Dovidovy endrika ka tian’ ny olona haratsiana ary amboalambo tarehy ka tian’ ny kabary hodiavina.
Faly, ravo, tretrika ny fo fa tsy nataonao anjoroam-bala ny fanasanay anao. Ry mpankafy ny kanto malagasy ; An-kafaliana hatrany no andraisana anao mpitsidika ny tranonkala mikolo ny tena teny.
Azo ampiasaina araka ny fepetra apetraky ny lisansa Creative Commons Attribution-ShareAlike ; Mety misy ny fepetra fanampiny mihatra. Fa hita tokoa ankehitriny: Ity pejy fandraisana ity, dia natao hanazavana ny momba ny tranonkala kabarymalagasy. Fikambanana Fikambanana Toerana iombonana Non-malagasy speakers.
Izay mahatonga ny tsy tia azy ho tia, noho ny hery tsy hay tohaina ao aminy. Vava diso tsy mba kabaryfa ny homana aza misy latsaka. Pareil au discours de Rainisalama: Fisa-molotra sendra kabaryka tojo ny sahaza azy. Eny tompoko, mafy tokoa izao fahoriana mihatra aminay izao ka mila tsy ho zaka fa olombelona moa, nefa izao fanontronanareo manao tongotra miara-mamindra sy tanana miara-mandray ary fo miara mitempo aminay izao, dia manamaivana ny fahoriana tokoa.
Fa raiso tsirairay ireo voatanisa etsy ambony ary tovano amin’ny fahatsapanao ny kabary ihany koa; ho hitanao fa tontolo midadasika sarotra faritana ary tsy voafaritra ny atao hoe kabary.
Kanefa na soa aza ny kabary; raha tsy hay tsinona tsy misy antony; fa toy ny fary fiahin’ny banga, tahaka ny penina anoratan’ny tsy nianatra. Fianarana Kabary Malagasy Literary Arts. Tsy noho ny tsy fahaizako miteny anefa no mahatonga ahy hiala tsiny eto, fa noho ny voninahitrareo manoloana ahy. Sections of this page. Tonga izahay tsy hamendrofendro na handatsa-dranomaso, fa tonga hitondra ny teny fampiononana. Nataonao dia ho very angaha aho no dia narianao tamin- kabary?
Kely dia kely ny vitanay nefa manantena izahay fa tsy hijery tarehim-bola ianareo fa ny tarehim-pihavanana izay efa nampifamatotra antsika no jerenareo. Tsy hikasa fotsiny ihany fa ho sarotiny aho hatrany sy hitaona olona maro ho saropiaro ny aminao ry tenindrazako!
Ary na izaho na ianao dia afaka hanandratra hatrany ny hasin’izany kolontsaina malagasy izany. Mamaly malagazy fanatsafana Azafady Azatsiny Mamaly ny arahaba Ranjan-kabary Misaotra tamin’ny tokim-pitiavana Misaotra amin’ny hajam-volana Mampadroso kaabary zatovovavy ary mamintina ny dinika aminy Manasa ny olona hisakafo Mofomamy Fisaorana sy fandravana.
Ka aza atao hoe inona iny na tsy hay aza, fa ny teny sy fiteny no iray amin’ny maha firenena ny firenena; ary ny kabary no iray amin’izay maha malagasy ny malagasy.
Sitraka sy telina tompoko ny vitanareo. Kabary tsy mahavery olona. Impiry moa isika no mbola tsy nanao ho zava-dehibe ny kabary, eny fa na dia hoe efa noho ny fombafomba ihany aza izany.
maoagasy Ho antsika efa mpitsidika anefa, dia mahatsikaritra fa nasim-panavaozana izy mba hifanaraka amin’ny fijerin’olo-mandroso. Kabary domboina ve raha ny anay, fa kabary tsy efan-kalady raha anareo. Tontoloko Tontolonao mpanoratra Fantaro ireo mpanoratra. Bon chien chasse de race. Eto dia mitodika aminareo RAD ny tenako, zary fanaka tokoa ny hazo satria natao tsaravoatra, ary zary olona izahay fa nataonareo tsarakolo.
Ny kabary Teny mivaingana ho hery mampihetsika ny fisainana, ny fitondran-tena Ny isa moa tompoko, fitarihana isa,ny tady fitariham-bato fa ny azafady kosa fitarihan-teny, maagasy manolotra azafadyTL, manolotra azafady TV, indrindra indrindra fa manoloana izato voninahitrareo ny maivana malwgasy raha tahaka ny vato, silam-bato fanao tambi-toko, songosongo fanao sisin-tsaha.
Arivo teny, zato kabary: Ny vilany mitongila adidy ny toko, ny basy tsy mipoaka adidin’ny vanja, ny omby mahia adidin’ny fahitra, ny akoho tsy maneno adidin’ny fisoko, ary ny kabary raha mati-maso adidin’ny malagasy tompony. Teny enti-mandranitra ny saham-pahalalan’ny isam-batan’olona Tononkalo SY kabary Band.
Vako Urban Mozika Artist. Rafitry ny kabary kabary am-panambadiana Fanaladiana Kabary am-bohitra kabary am-pandevenana Ranjan-kabary samihafa Ny mpikabary rindran-teny an-kabary. Ao ianareo namana maro, ny mpanao gazety, ny mpandrindra izao lanonana izao dia mendrika ny hisaorana tanteraka satria tsy mbola mahatsiaro ny reraka ianareo ny fanampianareo anay ary tsy mbola tao an-tsainareo ny hanosi-bohotanana ny fangatahanay ny hiara-iasa aminareo.